Wayzọ kachasị mma iji weghara ogige ntụrụndụ mba - LucidPix
Zọ kachasị mma iji weghara ogige ntụrụndụ mba
Wayzọ Kachasị mma iji Na-ese Foto Na Ogige Ntụrụndụ
E nwere ọtụtụ ụzọ iji nwaa ma jide ebube na oke ịdị ukwuu nke Ogige Ntụrụndụ nke America. Ihe ndị dị egwu dị ka Osimiri Colorado dị otu maịl ozugbo na Grand Canyon, ndị na-acha odo odo na Nkume Yellow, Ugwu Rushmore agbagoro na ugwu Black Hills, ma ọ bụ ije a na-adịghị ahụ anya nke Joshua Tree, agaghị enwe ike iji igwefoto weghara ya kpamkpam, mana ị nwere ike bi nso nso ka ho.
Teknụzụ ọhụrụ AI nwere ikike iji mepụta ihe osise 3D na foto ị na-ewere n'ogige ntụrụndụ mba ọ bụla. Mmepe ọhụụ a dị ebube, na-enye akara ala ndị a ohere ka ewere ya n'ebube zuru oke ha omimi na mmekorita foto 3D ahụ na-enye onye na-ekiri ihe karịa ka ha nweburu na mbụ, na-eme ka ndị na-ege gị ntị nọrọ na ezigbo ịma mma nke ala ahụ.
Mkpa iweghara ogige ntụrụndụ mba
Were Ugwu Rushmore na Black Hills National park, nke na-adọta ihe dị ka nde mmadụ atọ na-eme njem nlegharị kwa afọ iji lelee ebube ya. Nke ahụ bụ 3% nke ndị US kwa afọ dị njikere iwepụta oge ha iji mee njem nke ọma n'ụzọ ha iji nụ ụtọ ihe egwu ndị ahụ a wapụtara na nkume.
Cheedị echiche mmadụ ole na-enweghị ohere iji hụ ya, kama jiri igwe nchọta ha were nweta naanị ya. Ugbu a, lee ka ọ ga-esi atọ ndị mmadụ niile ahụ ụtọ ma ọ bụrụ na foto niile ahụ nọ na 3D. A ga-emikpu ha n'ime ebe ncheta ahụ. N'ebe ha nọ, ọ nwere ike ịdị ka ha guzoro na ntọala nke ugwu ahụ, na-ele anya n'ihu Abraham Lincoln.
Ihe onyonyo nke metụtara uzo i nejeghari ihuenyo ya ma obu sere ya esere, na-enye mmadu obi iso ya n’okporo uzo. Nke ahụ bụ ihe foto 3D, nwere ike ime maka ala ndị a na - enye ike, bụ inye ụfọdụ ụdị obi ụtọ nye ndị na - agaghị enwe ohere ịga ebe dị ka Ugwu Rushmore. Ọ bụ otu a ka ọ ga - esi weghara ogige ntụrụndụ mba ụzọ nke enweghị foto ọ bụla ọzọ nwere ike.
Uru nke teknụzụ 3D
Nke a bụ ebe ụlọ ọrụ na-amasị LucidPix, baa na Nke a bụ ozi maka LucidPix; ime ka onye n’enweghi ohere inodu ebe ozo, odi ka odi.
A ga na-enwe ebe ndị mmadụ na-anaghị enwe ohere ihu na ihu na mmadụ, n'agbanyeghị etu anyị siri mee njem ma ọ bụ ego ole anyị nwere. Ugbu a anyị nwere ike ịbịaru nso karịa iweta ala ndị ahụ na ndị mmadụ. Gini mere iji ikike a wetara ndị mmadụ gburugburu ụwa ọ joyụ, obi ụtọ, na egwu dị egwu?
Na ngwụcha, nke ahụ bụ ndụ, na-eme ihe na-atọ ndị ọzọ ụtọ. Yabụ mgbe ị na-achọ idetu Parks National ma ọ bụ akara ala mara mma na mpaghara ọzọ, gbalị iji teknụzụ Image Image 3D; ị gaghị akwa ụta na ya.
Atụmatụ 3D Foto - Otu esi agbapụ foto kacha mma 3D →← 5 Atụmatụ iji nọgide na-arụpụta ihe mgbe ị na-arụ ọrụ site n'ụlọ